80-jiro Jacaylkoodi U Rumoobay 63-Sanadood Ka Dib | Hawraar
October 28, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
80-jiro Jacaylkoodi U Rumoobay 63-Sanadood Ka Dib
Nin oday ah oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa dhawr iyo lixdan sanadood ka dib ku guulaystay inuu hantiyo jacaylkiisi ayna u rumowdo riyadiisi muddada dheer uu ku naaloonayay.
Sida jariirada Daily Mail ee ka soo baxda Britain ay ku warantay Bill Abram ayaa wakhti aad da’diisu u yar tahay waxa uu jeclaaday haweenay aad u cajabisay, ka dibna waxa uu qorsheeyay sidii uu u guursan lahaa ee ay u noqon lahayd lamaanaha nolosha la wadaagta, nasiib daro se kumuu guulaysan oo umay rumoobin riyadaasi, waxaana jacaylkii iyo doonistii meesha ka saaray waalidka dhalay haweenaydii uu jeclaaday Peggy Fryer oo ku gacmo saydhay in gabadha uu dhalay uu ku daro ama u guuriyo ninkan. Aabaha dhalay haweenayda Mr. Bill jeclaaday ayaa ku andacooday xiligaas in gabadhiisu tahay 16-jir oo aanay gaadhin xili loo guuriyo. Fashilkaasi wuxuu kala kaxeeyaya lamaanahan.
Xiliga sheekadani dhacday ayaa ahayd sanadkii 1949-kii labadan ruux ee is jeclaadayna waxay ahaayeen kuwo aad da’doodu u yar tahay. Mid walba wixii intaa ka danbeeyay muu ilaawin jacaylkiisa kamana quusan in mar uun ay gogol iyo guri ku kulmi doonaan.
Sida jariiradu sheegtay mid walba wuxuu guursaday ama yeeshay xaas kale. Inkastoo aragtidoodu yarayd oo waayuhu kala fogeeyay, haddana iska war hayntoodu may ahayn mid gabi ahaanba wada go’day. Sida aad sawirka ka aragtaan waxa ay dib mar kale ugu kulmeen, goobtii lagu kala dhaqaajiyay ee xaafada dalka Britain halkaas oo ay ku go’aansadeen in wakhtiga nolosha uga hadhay ay dhaawaca ka bogsiiyaan jacaylkii isagoo barbaar yar ah la beegsaday, ayna noqdaan lamaane wada jir ugu hoyda guri gudha.
Haddaba waxa is waydiin leh sidee ayay u dhacday sheekadii dib isugu soo noqoshada lamaanahani. Sida jariiradu sheegtay mid walba waxa uu noqday xaasley oo caruur ayuu dhalay, ka dibna caruurtoodi caruuro ayay sii dhaleen, laakiin midna muu tix galin inuu u joojiyo jacaylkiisa oo uu go’doon u noqdo.
Waxaana markii mid walba calafkiisi qaaday ayaa waxa soo waajahay duruufo kala duwan oo mid walba lamaanihiisi ka qaaday, odayga ayaa isagu xaaskiisi hore furay tobanaan sanadood ka hor oo ahaa mid kali joog ah, wixii ka danbeeyay markii ay kala tageen xaaskiisi oo laba caruur ah u dhashay.
Isagoo guur danbaba ka saahiday, ayuu subax hore iibsaday wargeys ka soo baxa magaaladda London, waxaanu ku arkay tacsida odaygii jacaylkiisi yaraantii oo haweenay uu si fiican u garanayaana ku garab sawiran tahay.
Laga bilaabo wakhtigaas waxa dib u shaqaysay maskaxdiisi gaar ahaana waxa sida dhiiga u soo butaacay, xusuustii waayo waayo. Sida uu sheegay markiiba wuxuu bilaabay inuu telefoon u diro, oo ka tacsiyadeeyo.
Muddo ka dibna waxa bilaabmay xidhiidh sheeko oo la wada yeeshay, ka dibna guur baaba xigay. Imika labadaa ruux iyagoo aad u faraxsan ayay dhayayaan nabaradii jacaylkoodi yaraanta.
Xikmad Kooban Oo Ku Saabsan Dookha Ragga Iyo Dumarkaba.
QAABKAY ISKU QURXIN JIREEN DUMARKA SOMALIDU IMIKASE SIDEY ISKU QURXIYAAN ?
NIMCO CALI MIGIL TIIRAANYO NEW VIDEO 2018 HD
NAJAX CABDIRAXMAN MASSAGEYADA HAYGA JARIN NEW VIDEO 2018 HD
KHADRA DHEEMAN IYO SHARMARKE BAAZ ADAN KUGU KOBANAHAY 2018 HD
UBAX BADBAADO NEW SONG 2017 HD
SAMSAM SHARAF NOOLI KULANTE NEW VIDEO 2018 HD
YURUB GEENYO IYO BANDHIGA BEERTA LIBAAXYAADA IYO HEESO CUSUB
NEW SONG FANTASTIC BOYS JIGJIGA & XIDIGAHA GEESKA DHOOL 2018 HD
AXMED RAYS NAFTANI DIIQAD MOOYEE KUGU RAYSAN WAYDEE NEW VIDEO 2018 sax
AXMED RAYS HESHIISKII DHAXDEENA YAALEY NEW VIDEO 2018
AXMED RAYS LADABAALO CAASHAQA NEW VIDEO 2018 HD
AXMED RAYS DR CISHQIGA NEW VIDEO 2018 HD
KHADIIRA DHALAD NEW OFFICIAL VIDEO DHALANTEED 2018 HD
MUKHTAAR BEEROOF MUNA LIVE SHOW XIDIGAHA GEESKA 20`18 HD
MUSTAFE BOOS HEES MAAMUUSEED AYAAN CUKEEYE FINAL
NIMCAAN ONKOD LAMAANE IS JECEL LIVE SHOW 20`18 HD
KHAALID MESSI DHAMMAYS XIDIGAHA GEESKA LIVE SHOW 2018 HD
CABDIRISAAQ ANSHAX KA ILBAXAY JACEYLKII LIVE SHOW 20`18 HD
MUKHTAAR BEEROOF WAXAAD TARAYSAA YARAA LIVE SHOW 2018
AXMED AARSHE QISO DHABA : QURUX MALEH ADUUNYADU QOYS AAD KA MAQANTAHAY LIVE SHOW 20`18 HD
CABDIRISAAQ ANSHAX QAAYO BADAN LIVE SHOW 20`18 HD
XIDIGAHA GEESKA OO SOO DHAWEEYAY HODAN CABDIRAXMAN IYO YURUB GEENYO
BARNAAMIJKA DHAQAN IYO SUUGAAN WARAABE
WAREYSI NIMCO YAASIIN CARAALE FULL PROGRAME
NIMCO YAASIIN GACALIYE OFFICIAL VIDEO 2018 HD